UN xogta heerka sarrifka ee 24/05/2022 10:30
US dollar In Oo shilin Soomaali sarrifka maanta. US dollar qiimaha Oo shilin Soomaali maanta.
US dollar In Oo shilin Soomaali sarrifka maanta
1 US dollar (USD) uyeelaysaan 578.82 Oo shilin Soomaali (SOS)
1 Oo shilin Soomaali (SOS) uyeelaysaan 0.001728 US dollar (USD)
Warbixin ku saabsan qiimaha US dollar to Oo shilin Soomaali ayaa la cusbooneysiiyaa maalintiiba hal mar. Qiimaha sarrifka lacagaha US dollar to Oo shilin Soomaali oo laga soo qaatay keydka macluumaadka lagu kalsoon yahay. Dhammaan hawlgallada sarrifka lacagaha ee bangiyada waxaa lagu sameeyaa iyada oo lagu saleynayo sarkaalkan rasmiga ah US dollar ilaa Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka maanta. Caddaynta qiimaha sarrifka lacagaha ee maalinlaha ah cusboonaysiinta waxaa laga heli karaa boggan.
Sarrifka Dibadda updated 24/05/2022 sida laga soo xigtay xogta UN.
1 US dollar hadda waa 578.82 Oo shilin Soomaali ee Yurub. 1 US dollar wuxuu qaali noqday 24.68 Oo shilin Soomaali maanta ee Bangiga Yurub. Maanta, US dollar heerka sarrifka ayaa kor u kacay Oo shilin Soomaali Yurub dhexdeeda. Maanta, 1 US dollar kharashyada 578.82 Oo shilin Soomaali ee bangiga Yurub.
Beddelaan US dollar In Oo shilin Soomaali US dollar In Oo shilin Soomaali ku nool suuqa sarrifka Forex US dollar In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
US dollar In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka maanta 24 May 2022
Sidee heerka sarrifka US dollar to Oo shilin Soomaali dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa lagu arki karaa tusaalaheenna keydka ku yaal shaxda. Jadwalka waxaa ku jira sicirka sarrifka maalmihii ugu dambeeyay. Marka loo eego iibsiga faa'iido leh ee lacagta - isbarbar dhig firfircoonida heerka sarrifka maalmihii dhawaa. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in la saadaaliyo heerka sarrifka ee US dollar to Oo shilin Soomaali berrito.
Qiimaha 1 US dollar sicirka sarrifka waa 578.82 Oo shilin Soomaali. Waayo 5 US dollar waxaad u baahan tahay inaad bixiso 2 894.11 Oo shilin Soomaali. Waayo 10 US dollar waxaad u baahan tahay inaad bixiso 5 788.22 Oo shilin Soomaali. Qiimaha 25 US dollar sicirka sarrifka waa 14 470.54 Oo shilin Soomaali. 1 US dollar wuxuu hadda la mid yahay 578.82 Oo shilin Soomaali. Heerka rasmiga ah ee bangiga qaranka. 1 US dollar ayaa kor u kacay 24.68 Oo shilin Soomaali maanta iyada oo loo eegayo heerka sarrifka bangiga guud ee dalka.
578.82 SOS 2 894.11 SOS 5 788.22 SOS 14 470.54 SOS 28 941.09 SOS 57 882.18 SOS 144 705.45 SOS 289 410.90 SOS
Qiimaha 1 000 Oo shilin Soomaali ee US dollar wuxuu hadda la mid yahay 1 000. 5 000 Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ayaa ah 8.64 US dollar. 10 000 Oo shilin Soomaali hadda waa 17.28 US dollar. 43.19 US dollar maanta waa qaali 25 000 SOS sicirka sarrifka. US dollar sicirka sarrifka ayaa sare u kacaya Oo shilin Soomaali. Marka loo eego 1 US dollar hadda waxaad u baahan tahay inaad bixiso 578.82 Oo shilin Soomaali marka loo eego heerka sarrifka bangiga qaranka. .
1.73 USD 8.64 USD 17.28 USD 43.19 USD 86.38 USD 172.76 USD 431.91 USD 863.82 USD